Chii chinonyanya kukosha Amazon keyword tools?
Mamiriyoni evashandi vanobva kumativi ose enyika vanoshandisa Amazon kuti vawane uye vatenge marudzi ose emiti, kutanga nezvokudya nekupedzisa nekudya nekupedzisa nemishandirapamba. Izvo zviri nyore kutenga zvigadzirwa kuAmazon as pano iwe unokwanisa kukurumidza kuwana zvinhu zvaunoda nekuda kwezviputa zvakawanda uye mabasa. Uyezve, iwe unogona kuverenga zvinyorwa zvomushandi uye chengeta kuyerwa kwevatengesi. Hapana ngozi yokuti iwe uchanyengerwa pano sezvo Amazon inofarira nezvevatengi nevatengesi.
Kugadzira kambani yako yekutengesa kuAmaiyo zviri nyore. Zvisinei, hazvisi nyore zvakafanana kuwana purofiti kubva pazviri - fiche pointage horaire. Iwe unofanirwa kuwandisa peji yako maererano neA9 algorithm inoda. Chimwe chezvikamu zvinokosha zvekutsvaga kwako kweAmerica kukutsvakurudza kwemashoko. Kuisa nguva nekushingaira muzvinyorwa zvako zvakakosha kuongorora zvinogona kuwedzera zvingaita zvekuwana mari uye kusimudza zvigadzirwa zvako zvekutsvaga uye zvakakosha mibvunzo yekutsvaga.
Muchikamu chino, tichakurukura kuti tingaita sei kutsvakurudza kwemashoko kuAmazon kuitira kuti michina yako ionekwe nevatengi vako paSERP. Tichava nekutarisisa zvakasiyana nemaoko e-Amazon keyword zvidzidzo uye edza kuwana zvakakosha zvikuru.
Izvi zvinosanganisira huwandu uye huwandu hwekuongororwa kwako, ivhu rekutengesa rawakaita munguva yakapfuura, kutendeuka kweroji yako peji yezvigadzirwa ((vangani vashandisi vanotenga zvigadzirwa zvako), uye zvinyorwa (zvakakosha sei zvigadzirwa zvako kumibvunzo yevashandi) . Zvizhinji zvekugadzirisa zvinhu zvinoda nguva asi kuwedzera kuverenga kwako kunyoresa chimwe chinhu chinogona kudzorwa pakarepo.
Chibatsiro chakakura ndechekuti kune nzira dzakawanda dzekuziva zvakananga mazwi ekutsvaga aunofanira kuaisa mune zvawakatora kuti uwedzere kutengesa kwako.
Saka, regai tikurukure zvimwe zvezvigadziriswa uye mazano ekutsvaga mazwi makuru anotsvaga maBusiness business promotion yako.
Ichi chigadzirwa chinobatsira kubatsira kuwana zvakanakisisa mashoko anokosha kumabhizimisi. Inoshanda zvakangofanana neGoogle Keyword Planner. Kutanga iwe unoda kupinda mazano ezvakataurwa uye uwane ruzivo rwemashoko anotsvaga anotsvaga ayo vatengi vako vangashandisa kuwana zvigadzirwa zvako. Kubatsirwa kukuru kwechirongwa ichi ndechokuti iwe unogona kuwana mazwi ekutsvaga mamwe maAmerica. Iyo inobatsira kugadzira zvakakodzera nguva-mutsara tsvaga kutsvaga kutora mu account Amazon tsvakurudzo basa basa.
Amazon inopa vashandisi nekutsvaga mazano pavanoshandisa mibvunzo chaiyo mubhokisi rekutsvaga. Amazon inoshandisa shanduro yakanakisisa yekupa vashandisi nemhando yakanakisisa yemidziyo kumubvunzo wavo. Keyword Tool inoshandisa iyi Amazon inowedzera kuunza mazana emakore-muswe mutsva kutsvaga mazwi eAmerican listing optimization. Kana iwe ukaisa izwi rako muchigadzirwa, Keyword Tool inoisa iyo ku Amazon search box uye inowedzera iyo netsamba dzakasiyana uye nhamba. Somugumisiro, unogamuchira runyorwa rwemashoko makuru emazano ebhizinesi rako.